HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraSoojiidashada Xasaasiga ah ee Xiisaha Leh Codsiyada Amniga Dibedda
13 / 12 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Warqad Hordhac ah, TURKEY
xasaasi ah waxay u muuqataa codsiyada amniga garoonka
Amniga deegaanku wuxuu muhiim u yahay baahiyaha amniga ee guryaha dadweynaha, warshadaha iyo xarumaha warshadaha, goobaha dhismaha iyo xeryaha. Nidaamyada amni ee wareega sida xayndaabyada xuduudaha ilaalinta deegaanka, dareemayaasha indhaha ee dhulka hoostiisa ama dareemayaasha darbiga ku dhegan, dareemayaasha dhaqdhaqaaqa, radar, caqabadaha microwave, kuwaas oo ku kala duwanaan kara sida ku saleysan goobta la isticmaalo, ogaanshaha xuduudaha jireed ee meelahaas gaarka ah oo digniinta laxiriirta u dirta xarunta kantaroolka. .
Maanta, baahida loo qabo ilaalinta deegaanka ee nolosha dadka waaweyn sida dhirta warshadaha, warshadaha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, xarumaha dhismayaasha shirkadaha, guryaha iyo unugyada guryaha ayaa sii kordhaya. Markay tahay tuuganimo ama xadgudub ku ah meeleeyaha gaarka loo leeyahay, nidaamyada amniga deegaanka ayaa ah kuwa ugu horreeya.
Nidaamyada amniga wareega ee ka kooban xayndaabka ilaalinta xuduudaha, dareemayaasha dhulka hoostiisa mara ama dareemayaasha darbiga, dareemayaasha dhaqdhaqaaqa, radar iyo caqabadaha "microwave" waxay u oggolaadaan qaabeynta xalka firfircoon ee firfircoonaanta iyadoo la dhexgalinayo nidaamyada kale. Adoo kaashanaya kamaradaha aagagga laxiriira, sawirada aaggii lagu xadgudbay ayaa si otomaatig ah loogu saadaaliyaa kormeerayaasha xarunta kontaroolka, si sarkaalka ay khusayso ama hawl wadeenku ay si dhakhso leh u arki karaan sawirada.
Markay tahay Xasaasiyad, deegaankaagu waa aamin!
Sensormatic, oo horumarisa xalka qaybaha kala duwan iyo baahiyaha ku saabsan teknoolojiyadda amniga, ayaa soo jiidata dareenka barnaamijyadeeda hal-abuurka ah iyo bii'ada ee bey'ada qaybta amniga deegaanka. Nidaamka amniga wareega ee 'Sensormatic' ee wareega wareega waxaa loo kala saarayaa afar cinwaan: digniinta siligga xiisadda, aasida, xayndaabyada iyo nidaamyada radar.
Nidaamka digniinta xasilloonida
Nidaamkani wuxuu ilaaliyaa gelitaanka iyo bixitaanka aan la fasaxin ee aag gaar ah wuxuuna siiyaa ilaalin buuxda adoo ku daraya nidaamyada kormeerka fiidiyowga IP iyo nidaamyada xakamaynta marin u helka Barnaamijkiisa, nidaamku wuxuu u oggolaanayaa isgaarsiinta xogta waqtiga-dhabta ah nidaamyada kale ee amniga ee shabakadda.
Nidaamyada ku lifaaqan
Nidaamka Amniga Xilliga Xabaasha; Xargaha fiilooyinka fiber optic-ka, waxay ku ogaataa gariir ku dhaca xuduuda. Sidan, software-ka khariidadda ku yaal bartamaha ayaa si sax ah u tilmaami kara aagga ay qaylo-dhaantu ka timid. Xasaasiga ah fiiloyinka fiber-ka dhulka hoostiisa ku yaal wuxuu kala saari karaa cadaadiska iyo gariirka ka socda dhulka qof, gaari ama xayawaan. Sidaa darteed, qaylada beenta ah waa laga hortagaa.
Radars ee howlaha amniga…
Radars, oo ka soo muuqday warshadaha difaaca, taraafikada, saadaasha hawada iyo duulista ilaa maanta, waxay noqdeen kuwa ka mid ah qaybaha caadiga ah ee amaanka deegaanka iyagoo uga mahadcelinaya in qiimahoodu noqday mid ay heli karaan adeegsadaha dhamaadka. Maalmahan, khataraha ka imaan kara guryaha gaarka loo leeyahay, garoomada diyaaradaha, xarumaha xogta iyo aagagga soohdimaha ayaa la aqoonsan karaa markii radar-ka fog yahay. Radars, oo go'aamisa xawaaraha, jihada iyo meesha ay ku jiraan walxaha adoo ka baaranaya gobolka mowjadaha raadiyaha, ayaa door firfircoon ka leh ujeeddooyinka amniga.
Si ka duwan nidaamyada amniga ee kale, nidaamkani wuxuu la shaqeyn karaa tamarta qorraxda, qaasatan meelaha waaweyn iyo codsiyada muddada fog ee khidmadda fiilooyinka korantada. Nidaamyadan keydinta tamarta waxay siinayaan waqti iyo fududeyn labadaba rakibaadda iyo howlaha fulinta.
Xal u helista xayndaabka wareegga-wareega ee wareega ayaa lagu kala saaraa awoodda ay u leeyihiin inay ka shaqeeyaan deegaanno adag. -35 illaa + 70 darajo ayaa ka shaqeyn kara deegaan kasta, labadaba juquraafiyo kaladuwan, iyo sidoo kale aagagga leh kala duwanaansho heerkul sare ah oo u dhexeeya maalinta iyo habeenkii ayaa bixiya xalka ugu habboon. Isticmaalka tamarta qorraxda waxay siisaa ilaalin waarta iyada oo aan loo baahnayn tamar dheeraad ah, xitaa wadamada Waqooyiga Yurub ee udhow ulaha. Haddii fiilada la jaro ama jabiyo meel kasta, waxay ku sii wadaysaa inay bixiso nabadgelyo iyada oo loo sii marayo fiilo dheeraad ah oo loogu talagalay hagaajinta ama beddelaadda.
Wax soo saarka, oo sidoo kale oggolaanaya dhexgalka nidaamyada la socoshada fiidiyowga, waxay muujinayaan wadaha goobta uu alaarmiga ku yaal khariidadda dhismaha kambuyuutar. Waxay kicisaa kamaradda ugu dhaw aagga ay qaylo-dhaantu ka timaado, iyagoo u keenaya muuqaalka kormeeraha wadaha. Sidan, qaladaadka ay ku hawl galaan shaqaalaha waa laga hortagaa dhacdooyinka si dhakhso ahna waa loo faragaliyaa.
Adeegyada Amniga Xasaasiga ah
Sensormatic, oo muddo sanado ah u hayey hoggaanka wershadaha, ayaa ah is-dhex-galka xallinta teknolojiyadda oo ay u taagan tahay xalalka madax-bannaan ee ku habboon qaybta iyo baahiyaha. 25 takhasusay dhow la leh iyo Tafaariiqda xafiiska 300 ee Turkey, duulista, Dowladda iyo Caddaaladda, Banking and Finance, Ganacsiga & Warshadaha, Energy, Caafimaadka, Waxbarashada, Logistics, isboortiga, dalxiiska iyo deegaanka hoteelada amniga iyo hufnaanta Shaqooyinka jilitaanka si toos ah shaqada xalalka farsamada. Xalka xasaasiga ah waa; kormeerka fiidiyowga iyo helitaanka xalka xakameynta, nidaamyada noolaha, nidaamyada amniga wareega, helitaanka dabka iyo xalka qaylo-dhaanta, xalalka alaabada elektiroonigga ah, RFID iyo xalalka falanqaynta bakhaarka, nidaamka tirinta dadka, nidaamyada fiilooyinka iyo fiilooyinka wireless.
Meelaha Baabuurta Baabuurka Baabuurta Bixinta Fikrada ah (Sawir Sawir)
Rakaabka waxay ku adagtahay in ay gaaraan laba saldhigga Marmaray
Izmir ma soo jiidanayso telefoonka metro, Izmir ayaa soo jiidata
Zet Gearboxes waxay soo jiidataa dareenka adduunka iyada oo la isticmaalayo qalab gaar ah
TCDD ayaa keeneysa maalgashiga
Hook, Europe waa soo jiidasho tayo leh
IDO ayaa riday raashin bilaash ah oo ka soo horjeeda Bridge Osmangazi
mashaariic ay ogaadeen in dalka Turkiga barbaro dareenka
Nidaamka Amniga wareega
Codsiyada Amniga Dibadda ee Xasaasiga ah